जस्तालाई त्यस्तै: आफ्नो श्रीमती भगाउनेकै श्रीमती भगाईदिए - News36media
तपाईं दीपक हो ?
म जितबहादुर दर्नाल, कतारबाट किन मेरी श्रीमती लानुभा’को ?
यो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा रहेका मोरङ, उर्लाबारी ६, मंगलबारेका जितबहादुर दर्नाल तथा सोही गाविस वडा नम्बर ९ का दीपक नेपालीबीचको फोन वार्ता हो ।
करिब तीन किलोमिटरको दूरीमा घर भएका जितबहादुर दर्नाल र दीपक नेपालीका श्रीमती यसरी नै साटासाट भएका छन् जितबहादुरकी पहिलेकी श्रीमतीबाट पाँच वर्षमुनिका दुई छोरी आकृति र अंशु छन् भने दीपककी सात वर्षीया छोरी दिप्ती छिन् । परिस्थितिले श्रीमान श्रीमती साटिए पनि छोरीहरू भने आ आफैंसँग छन् । नयाँ जोडीसँग केही दिन काठमाडौंमा बि’ताएर
April 2, 2020 April 2, 2020 News36media
नेपाल टेलिकमले ल्यायो अहिले सम्मकै सस्तो अनि ठुलो डाटा प्याक (यसरी सजिलै लिनुहोस)